विहानै भरतपुर र काठमाडौंको ताजा परिणाम यस्तो छ ! • raradiodarpan.com
विहानै भरतपुर र काठमाडौंको ताजा परिणाम यस्तो छ !
भरतपुर महानगरपालिकाको प्रमुखमा नेकपा माओवादी केन्द्रकी उम्मेदवार रेणु दाहालले अहिलेसम्मकै धेरै मतान्तरसहित अग्रता लिएकी छन् । गठबन्धनको साँझा उम्मेदारविरुद्ध नेपाली काँग्रेसबाट बागी उम्मेदवारी दिएका जगन्नाथ पौडेलले करिब ६ हजार मत काट्दा पनि रेणुको अन्तर बढ्दै गएको छ ।
विहीबार बिहानसम्म ३७ हजार ८६७ मतगणना हुँदा रेणुले १४ हजार ३७७ मत प्राप्त गरेकी छन् । दाहालले करिब ३ हजार मतले अग्रता कायम गरेकी छन् । नेकपा एमालेका विजय सुवेदी ११ हजार ४३१ मतले पछ्याइरहेका छन् । उनी निरन्तर पछि पर्दै आएका छन् ।
त्यसैगरी उपमेयरमा गठबन्धनका उम्मेदवारले चित्रसेन अधिकारी १६ हजार ७४१ मतसहित अगाडि छन् । उनका प्रतिस्पर्धी राप्रपा उम्मेदवार हिमला गुरुङको मत ९ हजार २६९ मात्र छ । यो परिणामले पौडेलले रेणुलाई आउने मत मात्रै काटेका छन् । बागी उम्मेदवार पौडेलले उपमेयरको मत काटेका छैनन् ।
यसैबीच काठमाण्डौ महानगरपालिकाको ताजा मत परिणाम सार्वजनिक भएको छ । स्वतन्त्र उम्मेदवार बालेन शाहले २० हजार मत कटाएका छन् ।
महानगरको पछिल्लो मत परिणामअनुसार ५४ हजार ४ सय ८९ मत गन्दा बालेन शाहले २० हजार ६ सय ७९ मत प्राप्त गरेका छन् । उनले एमालेका उम्मेदवार केशव स्थापितलाई ९ हजार ५ सय ७६ मतले पछाडि पारेका छन् । स्थापितले अहिलेसम्म ११ हजार १ सय ३ मत प्राप्त गर्नु भएको छ ।
नेपाली कांग्रेसकी सिर्जना सिंहले ९ हजार ५ सय ५६ मत प्राप्त गर्नु भएको छ । उपमेयरमा एमालेकी सुनिता डङ्गोलको फराकिलो अग्रता कायमै छ । उनले अहिलेसम्म २० हजार ७ सय ३ मत ल्याएकी छन् । एकीकृत समाजवादीका रामेश्वर श्रेष्ठले ६ हजार ५ सय ३३ मत पाएका छन् ।
यसैबीच निर्वाचन आयोगले १ सय ५४ वटा नगरपालिका र ३ सय ७४ वटा गाउँपालिका गरी ५ सय २८ वटा पालिकाको अन्तिम नतिजा सार्वजनिक भएको जनाएको छ । जसमाः
कांग्रेसः अहिलेसम्म नेपाली कांग्रेस २ सय ३९ पालिका जितेर पहिलो स्थानमा छ । कांग्रेसले ८० नगरपालिकाको मेयर र एक सय ५९ वटा गाउँपालिकाको अध्यक्ष जितेको छ ।
एमालेः एमाले दोस्रो स्थानमा कायमै छ । एमालेले अहिलेसम्म ४६ वटा नगरपालिकाको मेयर र १ सय १ वटा गाउँपालिकाको अध्यक्ष गरी एक सय ४७ वटा पालिकाको प्रमुख पद जितेको छ । यस्तै एमालेले ५७ वटा नगरपालिकाको उपमेयर, सय वटा गाउँपालिकाको उपाध्यक्ष गरी उपमेयर तथा उपाध्यक्ष १ सय ५७ वटा जितेको छ । एमालेले एक हजार ६ सय ९३ वटा वडाध्यक्ष जितेको छ ।
माओवादीः नेकपा माओवादी केन्द्रले १६ वटा नगरपालिकाको मेयर र ८६ वटा गाउँपालिकाको अध्यक्ष गरी १ सय २ वटा पालिकाको प्रमुख पद जितेको छ । माओवादी केन्द्रले २४ वटा नगरपालिकाको उपमेयर, ८४ वटा गाउँपालिकाको उपाध्यक्ष गरी १ सय ८ वटा उपमेयर/उपाध्यक्ष जितेको छ । माओवादीले अहिलेसम्म ९ सय ८ वटा वडाध्यक्ष पद जितेको छ ।
नेकपा (एकीकृत समाजवादी): नेकपा एकीकृत समाजवादीले ४ वटा नगरपालिकाको मेयर, पाँच वटा गाउँपालिकाको अध्यक्ष तथा पाँच वटा नगरपालिकाको उपमेयर जितेको छ । नेकपा एकीकृत समाजवादीले उपमेयर र उपाध्यक्ष गरी १५ वटा पालिकामा जितेको छ ।
जसपाः जसपाले १२ वटा पालिकामा अध्यक्ष र १० वटा पालिकामा उपमेयर तथा उपाध्यक्ष जितेको छ । जसपाले १ सय ८७ वटा वडाअध्यक्ष जितेको छ ।
अन्य दल/स्वतन्त्रः अरु दल र स्वतन्त्रले गरी २१ वटा पालिका जितेका छन् । त्यस्तै १५ वटामा उपमेयर/उपाध्यक्ष जितेका छन् ।